သူစိမ်းတို့နှင့် ရင်းနှီးအောင် လုပ်ဆောင်ရာဝယ် | Duwun
နေရာသစ်တွေမှာ လူသစ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အခါ မိတ်ဖွဲ့ဖို့က ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကိုယ် မရင်းနှီးတဲ့ နယ်ပယ်က လူတွေနဲ့ Relationship တည်ဆောက်ရာမှာ အခက်အခဲရှိနေတဲ့ မဒီလေးတွေအတွက် Tips လေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင် အသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့တာ၊ Public ပွဲအခမ်းအနားတွေ တက်ရောက်တာ စတဲ့ နယ်ပယ် အသစ်သစ်က လူအသစ်အသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး မိတ်ဆွေဖွဲ့တာတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ ဘာပြောရမယ်မှန်းမသိ၊ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိ Awkward Moment တွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
၁။ ဦးစွာ စကားဝိုင်းတစ်ခု ဖန်တီးပါ
တစ်ဖက်လူက စကားစပြောချင်ပေမယ့် စမပြောရဲတာတွေ ရှိနိုင်တာမို့ သင့်ဘက်က သတ္တိရှိရှိနဲ့ စတင် ကမ်းလှမ်းရမှာပါ။စကားဝိုင်းစတင်တဲ့အခါမှာလည်း ဝါသနာကဘာလဲ? အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကဘာလဲ? စတဲ့ ပါ့ပေါ့ပါးပါး အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ စတင်မှ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက သက်သောင့်သက်သာနဲ့ စကားပြောဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်နဲ့ တစ်ဖက်လူက ဝါသနာတူ၊ ကြိုက်တဲ့ အစားအသောက်ချင်း တူနေမယ်ဆိုရင်တော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ ပြောနေစရာမလိုဘဲ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စကားဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့။ အမြဲတမ်း ယူဆထားရမှာက လူတိုင်းက စကားစပြောဖို့ မရဲဝံ့ကြဘူးဆိုတာပါပဲ။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရှိန်နေကြတာမျိုးပေါ့။
”Eye Contact ရသွားတာနဲ့ အရင်ဆုံးပြုံးပြလိုက်တယ်။ အရင်ဆုံး သူ့ကို တစ်ချက်အကဲခတ်လိုက်တယ် သူကအလုပ်ရှုပ်မနေဘူးဆိုရင် စပြီးမိတ်ဆက်တယ်။ သူနဲ့ကိုယ့်မှာ Common Thing တစ်ခုခု ရှိပြီဆိုရင် အဲဒီ အရာနဲ့ပတ်သတ်တာတွေ ပြောရင်းနဲ့ ရင်းနှီးမှုစယူတယ်” လို့ Sales Executive တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မဆုသက်က သူ့ရဲ့ဖြေရှင်းနည်းကို ဝေမျှပေးထားပါတယ်။
၂။ စကားပြော ကျွမ်းကျင်ပါစေ
စကားဝိုင်းဖန်တီးတာက ဟုတ်ပါပြီ။ ပြေပြစ်တဲ့ စကားဝိုင်းဖြစ်ဖို့ကလည်း လိုသေးတာကိုး။ ဥပမာ သူကနှင်းဆီပန်းကြိုက်လို့ ဘယ်လိုကောင်းကြောင်း ချီးမွမ်းပြောနေချိန်မှာ ကိုယ်က နှင်းဆီမကြိုက်လို့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စံပယ်ပန်းကောင်းကြောင်းသွားပြောရင် ဒီစကားဝိုင်းက အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအခါ ကိုယ်က တာ့ စံပယ်ပန်း ကောင်းကြောင်းလည်းပြော နှင်းဆီပန်းကလည်း တစ်မျိုးလေးလှကြောင်း ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်လူနဲ့လည်း ကတောက်ကဆတ်ဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိဘဲ စကားဝိုင်းက အဆင်ချောနေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် သင်ဟာ နားလည်ပေးတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ တစ်ဖက်လူက မှတ်ယူသွားတဲ့အတွက် ဆက်ဆံရေး ပိုကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။
၃။ တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးပါ
ဥပမာ Party တစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် အလှူတစ်ခုခုမှာ ကိုယ်မသိတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ စားပွဲတစ်ခုထဲ ထိုင်ရတယ်ဆိုပါစို့။ စားပွဲပေါ်က သူလက်လှမ်းမမီတဲ့ အရာကို ကမ်းပေးတာမျိုးတို့ လာချပေးတဲ့ အစားအစာကို ကိုယ်အရင် မယူဘဲ တစ်ဖက်လူကို ဦးစားပေးလိုက်တာတို့က သေးသေးမွှားမွှားကိစ္စဆိုပေမယ့် သူနဲ့ ကိုယ်ရင်းနှီးလာဖို့ လမ်းစလေးတွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ကူညီပေးလိုက်ရင်း အနည်းနဲ့ အများတော့ စကားပြောရင်း ရင်းနှီးသွားမှာပါ။
၄။ ဂရုတစိုက်နားထောင်ပါ။ မှတ်သားထားပါ။
ပထမအကြိမ်ဆုံတွေ့ပြီး စကားတွေပြောဖြစ်ချိန်မှာ သေသေချာချာနားထောင်ပေးပါ။ သူတို့ရဲ့ နာမည်တွေကို သေချာမှတ်ထားပါ။ တတ်နိုင်ရင် သူတို့ ဘာကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာတွေပါ မှတ်ထားနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာ နာမည်တောင် မမှတ်မိရင် သင်က သူတို့ကို အလေးမထားဘူးလို့ တစ်ဖက်လူက ထင်မြင်သွားနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဒီလို အသေးအမွှားလေးတွေကိုသာ သတိထားပြီး မှတ်သားထားမယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တွေ့တဲ့အခါ သူနဲ့ကိုယ့်ကြားက ဆက်ဆံရေးကို ပိုတိုးတက်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချက်လေးတွေကို သတိထားပြီး လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် နယ်ပယ်အသစ်မှာ လူအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ Relationship တစ်ခုကို အခက်အခဲမရှိ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။ မဒီလေးတို့ အားလုံး မိတ်ဆွေကောင်းတွေ နဲ့ ဆုံဆည်းနိုင်ပြီး ဘဝကို အဆင်ပြေပြေ ဖတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်။